Vanhu vazhinji pasi rose vari kutarisa zvichabuda pakurudziro iri kuitwa nebato reDemocratic Party yekuti mutungamiri weAmerica, Va Donald Trump, vamiswe pamberi pedare vachitongwa nenyaya yekukurudzira vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga svondo rapera
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu rePennslyvania, Amai Audrey Maswela- Mpfumbu, vanoti vakarwadzikana nechiitiko ichi uye vanoshuwira kuti nyaya iyi igadziriswe sezvo zvakadayi zvange zvisingatarisirwe kuitika muAmerica.
"Zvino shungurudza kuwona mhirizhonga yakadayi ichiitika muAmerica umo munozivikanwa nenyaya yekuremekedza sarudzo, kuremekedza kodzero dzevanhu nehutongi hwejechetere," Amai Maswela-Mupfumbu vaudza Studi07.
"Izvi zvikatadza kugadziriswa zvichakonzera kuti dzimwe nyika dzitadze kuremekedza America,"Amai Maswela-Mpfumbu vaenderera mberi.
Dare rekongiresi riri kutarisira kuti mutevedzeri waVaTrump, VaMike Pence, vanogona kushandisa mutemo vodaidza dare remakurukota kuti kut ribude nehisungo chekuti VaTrump havakodzeri kuramba vari mutungamiri wenyika zvichitevera kukurudzira kwavakaita kuti paCapitol Hill paite mhirizhonga musi Ndira 06.
VaPence vakatadza kuita izvi, dare rekongiresi rinotanga hurongwa hwekusungisa VaTrump kuitira kuti vabviswe pachigaro chemutungamiri wenyika.
Hurukuri naAmai Audrey Maswela Mupfumbu